About Us - Keyu Zhanye Qalabka & Technology Co., Ltd.
Waxaan kaa caawin dunida sii kordhaya tan iyo 1995
Taageerada Call Phone: 0531-88825528
Taageerada email Email: alcohol@keyualcohol.com
Taageerada email Email: ethanol@keyualcohol.com
Taageerada email Email: sale@keyualcohol.com
Production Alcohol la Non-karis & technology non-saccharification
warshad dhamaystiran oo ethanol buuxda
warshad dhamaystiran oo-soo-saarka khamriga
warshad dhamaystiran oo DDGS
warshad dhamaystiran oo CO2 dareere
warshad dhamaystiran oo-soo-saarka sonkorta noqde
warshad dhamaystiran oo lagu qubo qashinka biyaha
Iskubedelka kulaylka muquuninta
Iskubedelka kulaylka Tubal
Shuruucda iyo heerarka
Jinan Keyu Zhanye Technology & Qalabka Co., Ltd.
Jinan Keyu Zhanye Qalabka & Technology Co., Ltd waa ganacsi oo technology sare & cusub. Waxaa la aasaasay by Professor ah, la taliyayaal, khubaro ah Shandong Light Industry University & Shandong Khamiirinta Design Machadka iyo koox ka mid ah injineerada sare. Waxaa loo soo maray in beerihii khamriga iyo CO2. Siminaarka degan 50,000 m2. Shirkadda waxa uu ku yaalaa magaalada qurux ilo Jinan, taas oo ah xarunta siyaasadda, dhaqaalaha iyo dhaqanka ee gobolka Shandong.
Tan iyo 1995, Company Keyu ayaa qabtey design, dhismaha iyo adeeg farsamo oo distilleries badan, manufactories ethanol iyo warshadaha kiimikada Shiinaha.
Shirkadda Keyu fulisay design ah, soo saaridda qalabka iyo adeegyada farsamada ee / mashruuc 100,000T Y tayo wanaagsan la cuni karo khamriga, mashruuca acetic acid 15,000T / Y, 10,000T / mashruuca CO2 Y iyo mashruuca daaweynta biyaha wasakhda khamriga ee Pakistan. Waxaan ku guul dhameystirtay 60,000 T / Y mashruuca ethanol shidaalka iyo mashruuca 30,000 T / Y protein feed (DDG) ee Russia. Waxaan sidoo kale la qorsheeyo oo loo dhiso khamriga superfine iyo mashaariicda la xiriira for macaamiisha American. tayada fiican iyo adeegga ayaa aadka u bogi ay macaamiisha ajnabiga ah.
Company Keyu had iyo jeer ku salaysan "adeegi macaamiisha si daacad ah" in la sameeyo mashaariicda soo socda labadaba gudaha iyo dibada.
A. ku dhaqaaqo guud design, dhismaha ama shaqo toobadda farsamada ee 3,000-500,000T / Y alcohols tayo wanaagsan-(GB10343-2008).
B. hawlgalo shaqada dhismaha 1,500-300,000T Y ethanol buuxda (hab kelli shaandho sariirta) / ka.
C. Design iyo in la siiyo qalabka helidda iyo soosaarida wanaagsan oo tayo CO2 fasalka cunto warshad distilleries / ethanol. Standard ee GB10621-2006 la gaaray.
D. Supply technology dhamaystiran (technology sare ee dunida) iyo adeegga dhismaha in ay soo saaraan feed granuleprotein (DDGS) ee dhirta distilleries / ethanol in ay isticmaalaan hadhuudh iyo sarreen ah sida qalab.
E. In la siiyo "ayuu eber vinasse Fasaxidda" farsamo, taas oo ah technology sare ee Shiinaha.
F. Bixi ee technology iyo qalab dhirta distilleries / ethanol in lagu daweeyo vinasses dareere ah si fiican, awood biyaha daata ee lagaga miiro si loo daboolo "Integrated daata Siideeynta Standard" (GB18918-2002).
G. Design iyo qalabka soo saaridda mashaariicda keydinta biyaha, iyo hoos u isticmaalka biyaha si 20m3 soo saarka ka mid ah khamriga ton.
H. soo saaridda qalabka khaaska ah ee warshadaha iftiinka iyo warshadaha kiimikada
Shirkadda Our ma aha oo kaliya siisa qalabka technology oo tayo sare sare-cusub laakiin sidoo kale bixiyaan adeegyada fiican-iibinta ka dib. tababar farsamo iyo adeeg farsamo oo dhan nolosha waxaa la siin doonaa ka dib markii uu soo dhameystay mashruuca iyo sidoo.
Hadafkeenu waa in la dhiso qanacsanaanta macaamiisha our technology top sar, qalabka top sar, credit taagan hogaanka sar sare iyo adeeg ka tirsan.
Jinan Keyu Zhanye Qalabka & Technology Co., Ltd waa technology sare & cusub enterprise.It waxaa la aasaasay by the Professor, la taliyayaal, khubaro ah Shandong Light Industry University & Shandong Khamiirinta Design Machadka iyo koox ka mid ah injineerada sare.